''ဂျင်ပါတီ''ဇာတ်ကားအတွက် ရင်ခုန်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ | Duwun
ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ဆိုရင် ရိုက်ကူးသွားမှာပါတဲ့။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ စတင်ရိုက်ကူးမယ့် ဂျင်ပါတီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်. ခင်လှိုင် နဲ့ ရွှေအိမ်စည် တို့ရဲ့ ရင်ခုန်သံ စကားတွေကိုအခုလို ပြောပြထားပါတယ်.
အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင် သွားကြမယ့် '' ဂျင်ပါတီ'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ကန်တော့ပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက M3 စားသောက်ဆိုင်မှာ မီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်. ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတော့ သူတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ကြရမယ့် ကာရိုက်တာ အကြောင်းတွေကို အနည်းငယ် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်.
'' ဂျင်ပါတီ'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးထဲမှာ ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ လူလိမ်မ ကာရိုက်တာ နေရာက သရုပ်ဆောင်သွားမယ့် အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ရဲ့ စကားသံကိုလည်း အခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်.
'' အူဝဲ အနေနဲ့ ဒါရိုက်တာ ရာဇဝင်ကို နဲ့က ဒါဟာ ပထမဆုံးကားဖြစ်ပါတယ်. အရှေ့မှာလည်း မောင်လေးက ချိတ်ပေမယ့် ရက်လေး အဆင်မပြေလို့ လွဲသွားတာလေးတွေရှိပါတယ်. ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ အူဝဲက လူလိမ်မ နေရာက ကာရိုက်တာနဲ့ ရိုက်ကူးသွားမှာပါ. အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ ရိုက်ကူးသွားပါမယ်'' လို့ ဆိုပါတယ်.
အဲ့ဒီနောက် ဇာတ်ပို့. ဇာတ်ရံ သရုပ်ဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ပီပီ ပါဝင်လာမယ့် ခင်လှိုင် ကလည်း သူ့ရဲ့ ကာရိုက်တာ နဲ့ အခုလို မိတ်ဆက် စကားပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်.
'' ကျွန်တော့်ရဲ့ ကာရိုက်တာနေရာကတော့ ဦးလေး တစ်ယောက်ရဲ့ နေရာက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရမှာပါ. ကျွန်တော့ ဇာတ်ရုပ်က လူသုံးယောက်နဲ့ တိုင်ပတ်တယ် ပြီးတော့ လူလိမ်မ တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပြီး ပြဿနာဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ရုပ်မျိုး သရုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်. ဒီဇာတ်ကားမှာလည်း ထူးခြား မှုတွေ ပါနေတာကို တွေ့ရတယ်'' လို့ သူကဆိုပါတယ်.
အလှမယ် တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်ဘက်မှာလည်း ကြိုးစားနေတဲ့ ရွှေအိမ်စည်က '' ဂျင်ပါတီ'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးထဲမှာ ပါဝင်ရမယ့် သူမရဲ့ ကာရိုက်တာကိုလည်း မိတ်ဆက်ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်.
'' အိမ်စည် ရင်ခုန်ပါတယ်. ရိုက်ရတာ ပျော်စရာကောင်းမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်. အိမ်စည့်ရဲ့ ကာရိုက်တာကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လူငယ်စတိုင်လ် ဂယက်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင် ရမှာပါ. အိမ်စည့် အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ အများကြီးမရိုက်ဖူးပေမယ့် သင်ယူစရာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်'' လို့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က ပုံရိပ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကန်တော့ပွဲမှာ ပြောပြခဲ့တာပါ.
ဂျင်ပါတီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က စပြီး စတင်ရိုက်ကူးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်. ဒီဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ ရာဇဝင်ကို က ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပြီး ရန်အောင်၊ လူမင်း၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ရဲရင့်အောင်၊ ထူးအောင်၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ ယဉ်လက်၊ ရွှေအိမ်စည်၊ Bella ၊ ခင်လှိုင်၊ ကိုပေါက်၊ ဂျိုကာ နဲ့ K ညီတို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။